Barnaamijka Baccalaureate-ka Caalamiga ah (International Baccalaureate) waa barnaamij tacliimeed oo lagu dhaqo adduunka oo dhan. IB wuxuu ka bilaabay Yurub 1968 si uu ula kulmo baahiyaha tacliimeed ee carruurta ee bulshooyinka caalamiga ah. Waxay isku dhafan tahay dhaqanka ugu wanaagsan ee waxbarasho ee dhammaan waddamada.
Baccalaureate-ka caalamiga ah wuxuu xooga saarayaa:
Daraasad adag oo ka socota dhammaan qaybaha tacliinta
Muwaadin mas'uul ah
Feker iyo naxariis fikir iyo xirfadaha wax weyddiinta
Nidaamka qiimeynta adduunka oo dhan ee ardayda ku qiimeeya heer caalami
Aragti caalami ah iyo ixtiraam aragtiyo kale
Barnaamijka IB Primary Years Program (PYP) waxaa si gaar ah loogu bixiyaa Dugsiga Hoose ee Lakeview. Ardaydeenu waxay sahamiyaan waxyaabaha ay wadaagaan khibrada aadanaha iyo inay bartaan muhiimada guud ee falalkeena. Dhammaan cutubyada baaritaanka ee Lakeview waxay ku dhacaan mowduucyada anshax-marinta. Fasal kastaa wuxuu leeyahay 6 cutub oo baaris ah, midna wuxuu hoos imaanayaa mawduuc kasta. Sannad kasta ardaydu waxay sahamiyaan qayb kale oo ka mid ah mawduuca anshaxa. Qeybaha 36 waxay si wada jir ah u dhisayaan Barnaamijkeena Baaritaanka.
Macallimiinta iyo shaqaaluhu waxay u heellan yihiin waxbarista ku dhisan fikradda:
adeegso aqoon hore si kor loogu qaado fahamka dhabta ah
baro qoto dheer ee fahamka, ma tiro
macnaha ku dhis fikirka muhiimka ah
Bixiyaan cutubyo anshax marin ah oo ardaydu ku bartaan aqoon, xirfado iyo dabeecado lagama maarmaan ah
Wareegga Waxqabadka PYP: milicsiga - Xulo Sharciga
Baaritaan guul leh, Barnaamijka Sanadaha Aasaasiga ah waa inuu u horseedaa ficil mas'uuliyadeed oo ay bilaabeen ardaydu iyadoo ay ugu wacan tahay nidaamka waxbarashada. Tallaabada wax ku oolka ahi badanaa waa heerka aasaasiga ah: iyadoo ay is leedahay: qoyska dhexdiisa; iyo bulshada dhexdeeda. Tusaalayaashu waxay noqon karaan waxbarid iyo wargalinta dadka kale, sameynta wax si looga hortago dhibaato nololeed oo dhab ah ama isbedel lagu sameeyo dhaqankeena. Guud ahaan, waxaan dooneynaa in ardaydeena ay daryeelaan naftooda, bulshadooda ayna ogaadaan inay wax ka badali karaan adduunkeena.